I-LIFX Beam yinkqubo entsha yokukhanyisa ekhanyayo | Iindaba zeGajethi
I-LIFX Beam yinkqubo entsha yokukhanyisa ekrelekrele ekhanyayo [Uhlalutyo]
Kwisixhobo se-Actualidad siyaqhubeka nokubheja ngamandla kwi-IoT kunye nekhaya eli-smart ukuze wenze ubomi bakho bube lula kwaye kube lula kwaye usebenzise ixesha kwizinto ezibaluleke kakhulu. Siphinde kwakhona phakathi kwethu kweemveliso zeLifx uphawu lokukhanyisa olubalulekileyo olubonisa ukuhambelana okuphezulu ne-Alexa, uMncedisi kaGoogle kunye neKhaya laseKhaya le-Apple, sikushiya uhlalutyo lwangaphambili kule khonkco ukuze ujonge.
Kolu hlalutyo sine I-LIFX Beam, inkqubo entsha yokukhanyisa i-smart bar ene-RGB ye-LED kunye nokuhambelana okuphezulu. Hlala nathi kwaye ufumane onke amandla okwenza enye yeendlela zokukhanyisa ezimangalisayo eziye zadlula kwitafile yethu yokuhlalutya.
Sijongene nemveliso ye-niche, kodwa loo nto unokuphilisa kwaye ngaphezu kwako konke wenze ikhaya lakho libe yimida ongenakucinga ngayo, Yimveliso ebonwayo kodwa ebonakala ikude kakhulu, into efana neYouTubers okanye abadali bemixholo, kodwa inyani kukuba ungayidibanisa ngokugqibeleleyo ekhayeni lakho ukuze uyinikeze ukubulela ngokwakho kumathuba anikezelwa ziinkqubo Imagnethi kunye nobuchule obuninzi bokumisela. Unokufumana ngokuthe ngqo ngale modeli kuyo iphepha lewebhu ukusuka kwi-149,99 yekiti yokuqala equka imivalo emithandathu kunye nekona.
1 Uyilo kunye nezixhobo: I-Lifx iyaqhubeka nokubonelela ngesiphelo esiphakamileyo
2 Iimpawu zobugcisa kunye nokuhambelana
3 Ulwenziwo kunye nofakelo
Uyilo kunye nezixhobo: I-Lifx iyaqhubeka nokubonelela ngesiphelo esiphakamileyo
Ukuba sinento ecacileyo malunga ne-Lifx, kukuba ime ngokuthe ngqo kwi-Philips kunye noluhlu lwayo lwe-Hue, ingaphezulu kwenqanaba lokuhambelana kunye nokupakishwa kwezinye iimveliso zemveli esele sizichazile apha. Sifumana ibhokisi enoyilo oludlamkileyo njengamaxesha onke, kodwa ngokuvula ngokulula kunye nokwaleka okuqinisekisa imeko efanelekileyo yazo zonke iibar zokukhanyisa. Sinezinto ezisemgangathweni ophezulu kokubini kwimivalo emithandathu nakwikona. Inentambo ende ngokwaneleyo ukuba ingaqhagamshelwa ngoku, kuba sineemitha ezi-0,5 ukuya kwiadaptha emva koko kwiimitha ezi-2 kunye neqhina lolawulo ngqo kwiyunithi yeBeam. Zonke ezi ntambo zimhlophe, zikumgangatho olungileyo kwaye kulula ukuzilungisa kwiimfuno zethu kunye nezo zefanitshala yethu, ngaphandle kwamathandabuzo.
Ubude bebonke: 6 x 30 cm
Intambo yenethiwekhi ubude: 2,5 yeemitha
Iadaptha yamandla iyahambelana nazo zonke iinkqubo (iadaptha ezikhoyo)
Inxalenye yayo sinemivalo, enendlela enye enesiphelo esilinganisa i-11,8 x 1,37 x 0,78 intshi iyonke, ubunzima be-95 yeegram ngokwahlukeneyo. Ngokudibeneyo banikezela ngobude obupheleleyo beemitha eziyi-1,80, esiya kuthi songeze ikona kwimeko apho sifuna ukuyinika imilo ethile. Ewe kunjalo, ngawaphi amathuba esiya kuba nawo. Kuya kufuneka sigxininise ukuba ine-3M tape ngasemva ukuze sikwazi ukuyibambelela naphi na apho sifuna khona. Kuncinci ukutsho ngakumbi kwinqanaba lezinto kunye noyilo, apho enkosi kubuncinci kunye nombala omhlophe weLifx kwakhona inika imvakalelo engenakuphikiswa yomgangatho.
Iimpawu zobugcisa kunye nokuhambelana
Siqala ngoqhagamsheleko, siqaqambisa ukuba uninzi lwezi mveliso sinonxibelelwano lwe-2,4 GHz WiFi (ayihambelani ne-5 GHz) kwaye Inye kwezi meko zinamashumi amathathu eesentimitha zinendawo ezinokulawuleka ezilishumi elinambini, ukuze sikwazi ukulawula nokuqwalasela imifanekiso eshukumayo, umzekelo ezinika uvakalelo olunomtsalane ngokupheleleyo, ngaloo ndlela zenza imeko-bume entle. Kwinqanaba lokusetyenziswa, sinama-27 W ewonke xa iiBeams ezintandathu zikowona mandla makhulu, kuba ukukhanya kuhlengahlengiswa ngokupheleleyo, kubonelela ngumahluko omkhulu kakhulu phakathi kokuqaqamba okuncinci kwe-1% kunye nobuninzi be-100%, yiyo loo nto iyenza ilungele amagumbi okulala kunye neeofisi. Amandla okukhanyisa ahlala efanelekileyo kwi-Lifx, kule meko sinezibane ezili-1.200 ezingasekhoyo okanye ezingaphantsi.
Imibala ezizigidi ezili-16
Iindawo zokukhanyisa ezili-10 kuzo zonke iisentimitha ezingama-30
Ukulawulwa kokuqaqamba kancinci
Ixesha eliqikelelweyo leminyaka engama-22 yokukhanyisa
Njengamaxesha onke, isicelo seLifx sithatha inqanaba eliphakathi, iPlagi kunye neMidlalo njengoko kufuneka ucofe ku "+" ukongeza isixhobo esitsha kwaye siyakuyifumana ngokuzenzekelayo ukuba siyisebenzise ukusuka kumzuzu wokuqala. Nje ukuba sisebenzise isicelo seLifx siya kuba nakho ukulawula imibala, ukukhanya, imeko kunye neeshedyuli ngokupheleleyo, ngokungathandabuzekiyo yenye yamandla ayo, kuba isicelo seLifx sesinye sezona zigqibeleleyo kwintengiso, njengokuhambelana kweemveliso zakho. . Ngale sicelo sithetha ngayo Siza kuba nakho ukwenza abancedisi belizwi abanayo le LIFX Beam: Ikhaya leGoogle, iKhaya laseKhaya leApple kunye neAmazon Alexa, ngokuqinisekileyo isibane esikrelekrele ngokupheleleyo.
Ulwenziwo kunye nofakelo
Si ikiti yokuqala yemivalo emithandathu kunye nekona, enokwandiswa ngokupheleleyo amaxesha amaninzi njengoko sifuna ngokudibanisaNjengoko zinomazibuthe, akukho ngxaki zokwandisa okanye ukunciphisa ufakelo lube yimida engacingekiyo, njengoko isiphelo esinye sinemagnethi yokufaka kwaye enye inemagnethi yokuvelisa, akunakwenzeka ukwenza impazamo xa uyifaka, ngendlela efanayo naleyo iteyiphu yakho yokuncamathela ngasemva iqinisekisa ukuba lula xa ubashiya apho sifuna khona.
Ukuthetha ngezongezo, Ikona nganye ixabisa i-9,99 yeedola ngelixa i-Beam nganye eyongeziweyo iya kuxabisa i-29,99, amaxabiso afana nalawo e-bulb nganye efanelekileyo. Ngokomgaqo, inkqubo ebandakanyiweyo isivumela ukuba sihlanganise inani elime nge «L» esinokuthi silungelelanise kwicala esifuna ukulifumana.
Njengoko sihlala siqala ngeyona mveliso imbi, kule meko ndinobunzima ekuqwalaseleni amanqaku amabi ngokuthelekisa le mveliso inomdla kunye nokhuphiswano, ukunyaniseka. Ingayiyo, ukubeka ezinye kodwa ixabiso linokuhlengahlengiswa ngakumbi (€ 149) kwaye alikafumaneki eAmazon Spain.
Le mveliso inamanqaku amaninzi ayithandayo, ndiqala ngayo inyani yokuba imimandla yokukhanyisa yenzelwe umntu ukuya kwinqanaba lokudinwa, ukwenza imifanekiso eshukumayo ukuba sifuna njalo. Kwelinye icala, usetyenziso olugqibeleleyo lwe-Lifx ikakhulu lubekek 'ityala ngale nto. Kwelinye icala ukufakwa ngokulula kunye nenyaniso yokuba zinemagnethi iphantse yodwa.
I-LIFX Beam yinkqubo entsha yokukhanyisa okrelekrele
Ngokuqinisekileyo yenye yezona mveliso zokukhanyisa ezikumgangatho ophezulu endikhe ndadibana nazo, ngokuhambelana phantse kuyo yonke inkqubo. Unokufumana ezinye iimveliso zeLifx ngokuthe ngqo kule khonkco kwiAmazon kunjalo Siyathemba ukuba uluthandile uhlalutyo lwethu kwaye usishiya kwibhokisi yezimvo kuyo nayiphi na imibuzo onokuba unayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-LIFX Beam yinkqubo entsha yokukhanyisa ekrelekrele ekhanyayo [Uhlalutyo]
I-Koogeek: Izaphulelo kwiiMveliso zakho zeKhaya eziBalaseleyo eAmazon